Isimo ibhizinisi lesimanje Kunzima ukucabanga ngaphandle amadivaysi ezinomsindo, lumbering imishini ngaphansi ngebutho elikhulu kuqaliswe metal endaweni impahla esithambile. Nokho, akekho oqonda ukuthi imisebenzi umbuso yidivayisi enamandla inikeza imishini yezobuchwepheshe for amafutha supply - imishini abavamile yakhelwe kuphela inhloso eyodwa - ukuze uthumele zokugcoba emaphuzwini akude.
Futhi kubo bonke labo nje ufuna ukuvula ukugeza imoto, isihloko salolu shicilelo. Zonke azi kahle ukuthi imishini for inkonzo kubiza imali eningi futhi ubukeka ngendlela efanele - esikhulu, esinamandla, bulky, bakwati kuhlatiya ukusebenza injini ngesikhathi esifanayo kwezinye imingcele lubricating ithuluzi.
Uma ufisa ukuba ngemva kokulunga nenjini futhi zonke izingxenye ukusebenza kahle isikhathi eside, udinga ukuthi ucabange ngokuthenga leli thuluzi. Manual supercharger uwoyela aludingi kwamandla, okusho uyakwazi kalula usebenze njalo, kungakhathaliseki ukuthi izinga lokushisa kanye nomswakama ezingeni.
Ihlangene futhi esebenza kahle, leli thuluzi kungaba esifanele kwabosizo - ukuphaka usebenze ngokuya. Yiqiniso, ukuphumelela ukusetshenziswa imishini enjalo, kanye namanye amadivayisi incike yenkuthalo opharetha, kodwa futhi ezingeni lomkhiqizo nalo libalulekile.
Iyala isipetu umoya Lubrication, qaphela, ungaphuthelwa imininingwane encane. Nakani womshini igobolondo isibhamu ithangi impahla elihambisana umfutho womoya. Kusukela lezi nemingcele ukusebenza idivayisi kuncike nempilo ende yayo. Ngicabanga ukuthi izincomo zami kuzokusiza sithole choice.
Atmosphere isitshalo yesimanje ayikwazi wacabanga ngaphandle ezihambayo izakhiwo nemishini, ephezulu sephrofayela, ibutho elikhulu ukuvula metal ibe impahla esithambile. Nokho, bambalwa bayazi ukuthi ukusebenza ungaphazanyiswa imishini enamandla ukunikeza imishini yezobuchwepheshe nokulethwa uwoyela - amadivaysi evamile kudingeka kuphela inhloso eyodwa - ukuphakela zokugcoba ezindaweni akude.
Kulabo nje ufuna ukuvula ukugeza imoto, isihloko lesi sihloko. Zonke wazi kahle ukuthi imishini semoto-ukunakekelwa esikhungweni kudinga imali eningi, futhi ubukeka ngendlela efanele - esikhulu, esinamandla, bulky, bakwati kuhlatiya ukusebenza motor e Ubukhulu eziningana. Nokho, ngasizathu simbe, bayalibala mayelana abasebenzi samanje, ehambisana ababenengqondo ingqondo - lubricating ithuluzi. Ngokwesibonelo, uma nje ukuthatha mathupha Blower zokugcoba, Uma unganakile lokhu - indlela ngokuphelele abavamile. Eqinisweni, i-umshini ophathwa ngesandla ungenza lokho amadivayisi besiyoba sikhulu abakwazi ukukwenza. Uma ufisa ukuba ngenxa silungisa indlela zonke izingxenye esebenza kahle isikhathi eside, udinga ukuthi ucabange ngokuthenga leli thuluzi. uwoyela Hand Blower akudingi supply eqinile kagesi, okusho kalula njalo ungasebenza, kungakhathaliseki ukuthi izinga lokushisa kanye nomswakama.
Lapha, ngokwesibonelo, i-Lubrication supercharger, okungase ngaphambilini kusukela ezidayiswa inthanethi. Small futhi esebenza kahle, leli thuluzi uyakwazi nganoma yisiphi isikhathi ukuze usize - ukwenza masinya. Yiqiniso, nekusebenta kule divayisi, njengabanye izindlela incike abasebenzi professional, kodwa futhi ikhwalithi yokukhiqizwa nalo libalulekile.
Ithi womoya amafutha isibhamu, qaphela, ungaphuthelwa zikhathi elincane incazelo. Bheka esitsheni igobolondo, umkhiqizo impahla isibhamu elihambisana umfutho womoya. Kulezi zici, ukusebenza kahle zedivayisi incike ukuqina yayo. Ngicabanga iseluleko sami kuzosiza ukunquma.
UPyotr Pavlovich Yershov, nombhali "I Humpbacked Horse" - umuntu enomqondo ovulekile ne eziningi izimfihlo